Active English သင်တန်း ( March နဲ့ April လ ဖွင့်လှစ်မည့် တန်းခွဲသစ် အချိန်ဇယားများ ပါဝင်ပါတယ် - Learn English Actively and Effectively in Yangon !!! 09 4311 5202 ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / သင်တန်း အချိန်ဇယား / Active English သင်တန်း ( March နဲ့ April လ ဖွင့်လှစ်မည့် တန်းခွဲသစ် အချိန်ဇယားများ ပါဝင်ပါတယ်
Active English သင်တန်း ( March နဲ့ April လ ဖွင့်လှစ်မည့် တန်းခွဲသစ် အချိန်ဇယားများ ပါဝင်ပါတယ်
Zin Zae 7:57 AM သင်တန်း အချိန်ဇယား Edit
သင်တန်းသားများ အဆင်ပြေ တိုးတက်စေဖို့ ၁၀၀% အာမခံ သင်ကြားပေးနေတဲ့
*** Active English သင်တန်း ***
( March နဲ့ April လ ဖွင့်လှစ်မည့် တန်းခွဲသစ် အချိန်ဇယားများ ပါဝင်ပါတယ် )
- Ebooks ( Post အဟောင်းများ စုစည်းမှု ၂ အုပ်) ) တွေ တောင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ :)
ဒီ Page မှာလည်း English ဘာသာစကားဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ / သင်ခန်းစာများကို ပုံမှန်တင်ပေးနေတာမို့လို့
မလွတ်တမ်း ဖတ်ချင်ရင် Page ကို Like လုပ်ပြီး See first ယူထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ ။
♦ English ဘာသာ စကားကို ရင်းနှီးတက်ကြွစွာ အပြန်အလှန်
♦ "English ဘာသာစကား ဟာ သင့်အတွက် အရံအတားမဟုတ်ဘဲ
♦ English ဘာသာစကား နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲ ကြုံနေရရင် ...
ကိုယ့်ကိုကိုယ် တိုးတက်အောင် ဘာဆက်လုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိဘူး ဖြစ်နေရင် ...
သင်ခန်းစာတွေတင် မက English ဘာသာစကား လေ့လာနည်:
စနစ်တွေကိုပါ သေချာလေ့လာလိုပြီဆိုရင် ...
( အခြား သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံရှိပြီ စေတနာ ပြည့်ဝတဲ့ ဆရာများနဲ့ အတူ ) ဦးစီး တည်ထောင် သင်ကြားနေတဲ့ Active English ကို လာရောက် လေ့လာကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ :)
Active English သင်တန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး
မေးမြန်း စုံစမ်းလေ့ ရှိတာလေးတွေ စုပြီး ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
Applied English ကို အဓိက ထားပြီး သင်မှာပါ…4 skills လုံး သင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် Listening နဲ့ Speaking ကို (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ဦးစားပေးသွားမှာပါ။
သင်ရိုးကို ခိုင်မာပြီး စနစ်ကျအောင် Cambridge University ရဲ့ Course တွေကို ယူသုံးပါတယ်။ ကျန်တဲ့ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုတော့ တစ်ခြား Cambridge သင်ရိုးမှာ မပါတဲ့ လိုအပ်မယ် ထင်တာလေးတွေ၊ သင်တန်းရဲ့ အဓိက ဟန်ဖြစ်တဲ့ Personal Development, Motivation, Effective Thinking, Successology စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သင်တန်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်အတိုင်း ဖြည့်စွက်ပြီး သင်ပေးပါတယ်။
(Reading & Writing က အရင်က ကျောင်းတွေမှာလဲ အတော် လုပ်ခဲ့ပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါ။)
ဒီတော့ အဓိက အားနည်းနေတဲ့ အပိုင်းတွေကို အရင် စကိုင်မှာပါ။ Grammar အဓိက ထားပြီး သွားတဲ့ သင်ကြားမှု ပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ အသုံးချ ဘာသာစကား သင်ကြားရေး ပုံစံကို အဓိက ထားမှာပါ။ (ပြောချင်တာက ကျောင်းသင် ပုံစံမဟုတ်ဘဲ Grammar က အနောက်က လိုက်မှာပါ။)
လက်ရှိ စဖွင့်တဲ့ သင်တန်း တန်းခွဲတွေမှာ သဒ္ဒါကို အလွန်အမင်း ဦးစားပေးပြီး မသင်ပါဘူး။ နားထောင်မှု စွမ်းရည်၊ တုံ့ပြန်နိုင်မှု စွမ်းရည် ၊ တွေးခေါ်မှု စွမ်းရည်၊ ပြောဆို ဆွေးနွေးမှု စွမ်းရည်တွေကို လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးဖို့အတွက် အချိန် ပိုပေးချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Grammar တအား အားနည်းတဲ့ ကျောင်သားတွေ အတွက်တော့ လိုအပ်သလောက်ကို ညှိပြီး အကြံပေး လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်။ ဆရာကိုယ်တိုင် အချိန် အနည်းငယ် ပေးပြီး တွဲဖက် လေ့လာရမယ့် ဖြည့်စွက် စာအုပ်တွေနဲ့ လေ့လာရမယ့် ပုံစံတွေကို ဆွေးနွေးပေးပါတယ်။ အချိန် အခက်အခဲကြောင့် တစ်ဦးချင်း ခေါ်ပြီး ထပ်သင်ပေးတာမျိုး မလုပ်နိုင်ပေမယ့် အဆင်ပြေမယ့် တန်းခွဲတွေမှာ ထပ်ကျော့ပြီး တက်ရောက် လေ့လာ လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ သင်တန်းမှူးတွေနဲ့ ညှိနှိုင်း နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ ဇွဲလေး နည်းနည်းထည့်လိုက်ရင်
တော်ရုံ အားနည်းသူတွေတောင် လိုက်နိုင်ကြပါတယ်။
သင်မယ့် ဆရာထဲမှာ ကျွန်တော် ( ကိုဇင်ဇေ ) ပါ ပါတယ်။
တခြား ပြင်ပက သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့ ဆရာတွေ ပါ ပါတယ်။
သင်ကြားမှု ပုံစံနှင့် မိမိ၏ တိုးတက်မှုအပေါ် ကျေနပ်မှု မရှိရင်သာ တကယ် ငွေပြန်အမ်း ပေးပါတယ်။
(တစ်ပတ် အတွင်းဆို (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း ပြန်အမ်းပေးပါတယ်။)
ကျွန်တော် သင်တန်းသားတွေကို ကိုယ်ချင်းစာလို့ ဒီ အစီအစဉ်ကို ထည့်ပေးတာပါ။
စာတတ်၊ စာတော်တိုင်းလည်း စာမသင်တတ်ပါဘူး။ စာသင်တတ်တိုင်းလည်း ကိုယ်နဲ့ ကိုက်မယ်လို့ သေချာပေါက် မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ သင်တန်းရဲ့ ဟန်နဲ့ မကိုက်ရင် မြန်မြန် တခြား ကိုယ်နဲ့ ပိုအဆင်ပြေတဲ့ ဆရာ ရှာနိုင်ဖို့ ဒီအစီအစဉ်ကို ထည့်ပေးထားတာပါ။
တန်းခွဲ တစ်ခုမှာ လူဦးရေ (၂၀ - ၃၀) ယောက် အထိပဲ လက်ခံပါတယ်။
အသစ်ဝင်လာတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အဟောင်းတွေနဲ့ ရောသင်တာမျိုး ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းမှာ လုံးဝ မရှိပါဘူး။
သင်တန်းကာလ တစ်ခုပြီးတိုင်း နောက် level တွေ ရှိပါတယ်။ ဆက်တက်လို့ရပါတယ်။
အကယ်၍ နောက် level တွေဆက်မတက်ဖြစ်ရင် ဘယ်စာအုပ် စာတမ်းတွေကို ဘယ်လို အသုံးပြုပြီး ဆက်လက် လေ့လာသွားရမယ် ဆိုတာကိုလည်း လမ်းညွှန် ပေးပါတယ်။
တကယ် ကျွမ်းကျင်ချင်ရင် ဘယ်ပညာရပ်မဆို “နာရီ တစ်သောင်း” အချိန်ပေးရတယ်လို့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ယုံကြည်ပါတယ်။
လပိုင်းလောက် တက်မယ်။ ဟိုဟာ ဖြစ်မလား?.. ဒီဟာ ဖြစ်မလား ဘုမသိ ဘမသိ (မေးသူရဲ့ အနေအထားကို မသိဘဲ) ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းမှ ပြန်မဖြေချင်ပါဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ လာမမေးပါနဲ့။
< အဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လည်း သီးသန့်ရေးပေးထားပါတယ် :) >
သင်တန်းပြီးဆုံးသွားသော်လည်း သင်တန်းသားဟောင်းတွေဟာ မိမိရဲ့ ကိုယ်တိုင်လေ့လာမှု လမ်းခရီးမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိခဲ့ရင် အမြဲ တတ်နိုင်သလောက် အကြံပေး ပေးပါတယ်။
သင်တန်းပြီးသွားလည်း English ဘာသာစကား လေ့လာမှုနဲ့ အဆက်မပြတ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး Channel ပေါင်းစုံ၊ Media ပေါင်းစုံ သုံးပြီး ဆက်သွယ် ပေးထားပါတယ်။
စာကြည့်တိုက် ထားပေး ထားပါတယ်။
English ဘာသာစကားဆိုင်ရာ စာအုပ်များသာမက English ဝတ္ထုတိုများ၊ စီးပွားရေး နှင့် တိုးတက်အောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာ English ၊ မြန်မာ စာအုပ် စာပေများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ အခြားသုတ၊ ရသနှင့် နည်းပညာ စာအုပ်များကို သင်တန်းသားများအတွက် စီစဉ်ထားရှိ ပေးထားပါတယ်။
♦ လတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ အချိန်အလိုက် တန်းခွဲသစ်တွေ ဖွင့်ပေးနေပါတယ် :)
♦ ActiveEnglishသင်တန်း မှာ
အဓိက Level3ခု ခွဲထားပြီး အသေးစိတ် ထပ်ခွဲလိုက်ရင်တော့
Level6ခု ဖြစ်သွားပါတယ် :)
အောက်ပါ အတိုင်းပါ :)
1. Elementary to Pre-intermediate ( Part-1 )
လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားတဲ့ တန်းခွဲတွေ ဖြစ်လို့ကြိုတင်စာရင်ပေးအပ်နှံပေးမှ အဆင်ပြေမှာပါ ။
☆ သင်တန်းကြေးက Level တစ်ခုစာ
( တစ်လခွဲ /၂လ/၃လ ) အတွက်ကို ၄ သောင်းခွဲ ပါ ။
စာအုပ်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ Mini-library သုံးစွဲခွင့်လည်း ပါပြီးသားပါဗျာ :)
♧ March လ အတွင်း အသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် တန်းခွဲများ ♧
♦ Elementary to Pre-intermediate - Part ( 1 ) Level
☆21.3.2016 > Mon,Tue,Wed,Thu >7:00 to 8:30AM >(2)Months>45,000 ks
☆7.3.2016 > Mon,Tue,Wed,Thu >9:00 to 11:00AM>(6)Weeks >45,000 ks
☆21.3.2016 > Mon,Tue,Wed,Thu >5:30 to 6:30PM >(3)Months>45,000 ks
☆21.3.2016 > Mon,Tue,Wed,Thu >6:30 to 8:00PM >(2)Months>45,000 ks
☆19.3.2016 > Sat , Sun > 9:30 AM to 11:00 AM>(3)Months>45,000 ks
☆19.3.2016 > Sat , Sun > 2:00 to 3:30 PM >(3)Months>45,000 ks
☆20.3.2016 > Sunday only > 11:30 to 2:00 PM >(3)Months>45,000 ks
☆30.3.2016 > Mon,Tue,Wed,Thu >9:00 to 11:00AM>(6)Weeks >45,000 ks
☆28.3.2016 > Mon,Tue,Wed,Thu >1:00 to 3:00PM>(6)Weeks >45,000 ks
☆28.3.2016 > Mon,Tue,Wed,Thu >4:00 to 5:30PM >(2)Months>45,000 ks
♧ April လ အတွင်း အသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် တန်းခွဲများ ♧
☆27.4.2016 > Mon,Tue,Wed,Thu >7:00 to 8:30AM >(2)Months>45,000 ks
☆27.4.2016 > Mon,Tue,Wed,Thu >9:00 to 11:00AM>(6)Weeks >45,000 ks
☆27.4.2016 > Mon,Tue,Wed,Thu >5:30 to 6:30PM >(3)Months>45,000 ks
☆27.4.2016 > Mon,Tue,Wed,Thu >6:30 to 8:00PM >(2)Months>45,000 ks